Ichekwa ndabere iPhone na kọmputa dị mkpa ma dị mkpa. Ọ na-enyere na-gị onye data mma ma chekwaa ya. E nwere ọtụtụ ihe ngwọta na-ahapụ gị ndabere iPhone mfe. Ebe a, m na-eche na-agwa gị na ha atọ. Na-agụ na ndị na-esonụ akụkụ, ma họrọ otu ezigbo onye na-eme iPhone ndabere.
Ngwọta 1. ndabere iPhone for free na iTunes / iCloud Ngwọta 2. ndabere iPhone na kọmputa na MobileTrans
Ngwọta 1. ndabere iPhone for free na iTunes / iCloud
Mgbe abịa iPhone ndabere, iTunes na iCloud eleghị anya Flash n'uche gị. Obi abụọ adịghị, ha na ezi helpers n'ihi na ị na nkwado ndabere na mpaghara iPhone. Na akụkụ a, ga-amasị m na-agwa gị otú ị ndabere iPhone ka PC na iTunes na otú ndabere iPhone ka iCloud na nkọwa.
Ndabere iPhone na iTunes
Ndabere iPhone na iCloud
1. Gịnị iTunes nwere ike ndabere?
Na iTunes, ị nwere ike ndabere nza nke onye data gị iPhone na PC. Ha na-na foto na video zọpụta na igwefoto Roll, kọntaktị, kalenda akaụntụ na ihe, na tụrụ ụtụ kalenda, olu memo, safari ibe edokọbara, ihe mere eme, kuki, offline data na ugbu a na-emeghe peeji nke, na-akpọ ihe mere eme, akwụkwọ ahụ aja, na ndị ọzọ. Mụtakwuo >>
2. Easy nzọụkwụ ndabere iPhone ka PC na iTunes
Nzọụkwụ 1. Open iTunes on PC na jikọọ na gị iPhone na PC site eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Your iPhone ga-ahụrụ ọma na gosiri na ekpe sidebar nke iTunes. Pịa gị iPhone n'okpuru NGWAỌRỤ na-egosi ya akara panel.
Nzọụkwụ 3. Gaa Backups ngalaba na nne Mmetụta kọmputa a. Na, na, pịa Back Up Ugbu a. Chere ruo mgbe ndabere usoro okokụre.
3. View iTunes ndabere na PC
Windows XP: \_ Documents na Mwube \_ (aha njirimara) \_ Ngwa Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_ Windows 7/8 / Vista: \_ Ọrụ \_ (aha njirimara) \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_
1. Gịnị iCloud nwere ike ndabere?
iCloud ike gị ndabere gị iPhone ka ígwé ojii site WiFi. Na ya, ị nwere ike ndabere ngwa data, visual ozi olu ozi olu, akwụkwọ ahụaja, ntọala, n'ụlọ ihuenyo, ngwa nzukọ, ozi (ederede, MMS na iMessages) na ndị ọzọ. Enweta ihe Ama banyere iCloud ndabere >>.
2. Easy nkuzi na akwado iPhone na iCloud
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala na gị iPhone na-atụgharị na Wi-Fi na netwọk.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ iCloud na abanye n'ime gị Apple ID na paswọọdụ.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Nchekwa & ndabere na mgbe ahụ gbanye iCloud ndabere.
Nzọụkwụ 4. Kpatụ OK> ndabere Ugbu a. Tienụ mkpu ákwá nkeji ruo mgbe nkwado ndabere na mpaghara usoro na dechara.
Ngwọta 2. ndabere iPhone na kọmputa na MobileTrans
Althought iTunes na iCloud ndị bara uru nkwado ndabere na mpaghara iPhone, e na ka ụfọdụ dị mkpa data ha nwere ike ọ bụghị ndabere, dị ka iPhone Photo Library, music na listi ọkpụkpọ site na CD, na ndị ọzọ. Nkwado ndabere na mpaghara ndị a iche iche data, ị chọrọ onye iPhone ndabere ka kọmputa transfer software, dị ka Wondershare MobileTrans. Ọ na-enye gị ike nkwado ndabere na mpaghara niile music, video, photos, kọntaktị na ozi ederede na 1 Pịa.
Ndabere iPhone na kọmputa ma weghachi ọ bụla na-akwado ekwentị!
Ndabere music, video, photos, na kọntaktị na SMS on iPhone na kọmputa.
Weghachite iPhone nkwado ndabere na mpaghara nyefee ka iDevice, Android na Nokia ekwentị.
Ibufee ọdịnaya site na iPhone ka Android na Nokia na ekwentị na iDevice na 1 Pịa.
Wepụ iTunes na nkwado ma weghachite ka a (n) Android ekwentị, Nokia na ekwentị na ngwaọrụ.
Dakọtara na iPhone 3GS / 4 / 4S / 5S / 5 / 5C / 6s (Plus) / 6 (Plus) mgbe na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5.
Nzọụkwụ 1. Wụnye Wondershare MobileTrans on Windows kọmputa
Download free ikpe version nke Wondershare MobileTrans on Windows kọmputa. Wụnye na-agba ya. Ka a software arụ ọrụ kwesịrị ekwesị, ị kwesịrị ị iTunes arụnyere na Windows kọmputa. Ke akpan window, na-aga na nkwado ma weghachite na pịa ndabere ịbanye ndabere window.
Wepụ ihe Apple eriri USB jikọọ gị iPhone ka Windows kọmputa. The Wondershare MobileTrans ga chọpụta ma na-aghọta gị iPhone n'otu ntabi na-egosipụta ya na nkwado ndabere na mpaghara window.
Nzọụkwụ 2. Back elu iPhone na kọmputa na 1 click
Ịhụchalụ ọdịnaya niile Ịnwere ike ịnyefe na nne Mmetụta gị chọrọ n'anya. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy. Jide n'aka na ọ bụghị ịkwụpụ gị iPhone. Mgbe ọ na-agwụ agwụ, pịa OK.
Nzọụkwụ 3. Weghachi ọ bụla na-akwado ekwentị na iPhone ndabere
Na iPhone ndabere faịlụ, ị nwere ike iweghachi ihe ọ bụla na-akwado ekwentị (Ha nwere ike ịbụ Android / Nokia Symbian ekwentị na iDevice). Ke akpan window, pịa Weghachi. Na ya adaala menu. Họrọ si MobileTrans ndabere faịlụ. Mgbe ahụ, jikọọ ọ bụla na-akwado ekwentị na kọmputa site na iji eriri USB.
All ndabere faịlụ egosi elu na ekpe kọlụm. Chọta iPhone ndabere ma họrọ gị chọrọ ọdịnaya n'etiti. Mgbe ahụ, pịa Malite oyiri iji weghachi iPhone ọdịnaya ọ bụla ekwentị na a na-akwado.
Otú nyefee Music si iPhone ka iTunes?
Otú nyefee Photo Library si iPhone ka Computer?
Olee otú mbupụ iPhone Ndi ana-akpo ka Gmail?
Otú nyefee Igwefoto Roll si iPhone ka Computer?
Olee otú Detuo Music si Mac ka iPhone?
Otú nyefee iPhone Ndi ana-akpo ka VCF?
Olee otú jikwaa Photos na gị iPhone?
> Resource> iPhone> Olee otú ndabere iPhone ka Computer na na-enweghị iTunes